Kunamata Kunongedzera Kupokana neBofu reMoyo | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Kunongedzera Kupokana neBofu reMoyo
Kunamata Kunongedzera Kupokana neBofu reMoyo
Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo kupokana nehupofu hwemoyo. Chimwe chezvinhu zvakaipisisa chingaitika kumurume hupofu. Iyo mamiriro umo kuona kwemurume kusiri kushanda. Fungidzira bofu richifamba mumugwagwa risina rubatsiro. Hwakadaro hupenyu hwemunhu akapofomadzwa pamweya. Hupofu hwemwoyo inzira yekudzinga iyo muvengi anoisa mundangariro dzevanhu, zvichivaomesera kutenda evhangeri yaKristu.
Bhuku ra 1 Vakorinte 1: 8 yakataura kuti Nekuti kuparidzwa kwemuchinjikwa kune avo vanoparara upenzi, asi kwatiri isu vanoponeswa isimba raMwari. Unongotenda muevhangeri yaKristu nekuti wakaponeswa. Avo vane moyo yakapofumadzwa nehunyengeri uye zvakaipa zvemuvengi vanozviona kunge hupenzi. Muvengi anonzwisisa izvi; ndosaka achiwanzo kupa vanhu nehupofu hwemwoyo. Zvisinei nekuparidza kwaunoita, kuwanda kweevhangeri kwaunoita, havazotenda Kristu ndiyo nzira, chokwadi, uye nechiedza.
Chinyorwa chinoenderera mberi chinotsanangura nemesis yerudzi urwu rwehupofu mubhuku ra 2 VAKORINDE Kristu, anova ndiye mufananidzo waMwari, anofanira kuvhenekera kwavari. Nekuti hatizviparidzi isu, asi Kristu Jesu Ishe; uye isu tiri varanda venyu nekuda kwaJesu. Nokuti Mwari, avo vakaraira kuti chiedza chivheneke kubva murima, vakavhenekera mumoyo yedu, kuti vape chiedza cheruzivo rwekubwinya kwaMwari pachiso chaJesu Kristu. ”
Munhu ane hupofu hwemwoyo igwai rakarasika. Igwai rakarasika nekuti harinzwe izwi remufudzi. Kunyangwe paanozvinzwa, haazozvitenderi. Izvi zvinodaro nekuti muvengi akaisa chifukidziro cherima pamoyo wake, izvo zvinokanganisa kunzwisisa kwake. Kupofomara kwemoyo chirwere chakakomba nekuti chero chinhu chinokanganisa moyo wemurume chinokanganisa muviri wese. Chinyorwa chinoti kubva mukuwanda kwemoyo muromo unotaura. Zvinoreva izwi rega rega, chiito, uye maitiro anobuditswa nemurume kubva mupfungwa dziri mumoyo make. Hazvishamisi kuti muvengi anotarisa pamoyo pevanhu vanohuita nehukuru hwakaipa.
Tichave tichisimudza chiyero nerima rega rega repamweya, nehupofu hwese hwemwoyo. Chinhu chekupedzisira chinoitika kumurume ane moyo usingaoni ndiko kusavapo kwekuvapo kwaMwari. Munhu akadaro anenge asisina mweya waMwari. Uye kana munhu akashaya mweya waMwari, munhu akadaro anova nyajambwa wadhiyabhori.
Munamato ndiwo wega mushonga wekurwara uku. Munamato uyu uchave munamato wekudzikinura. MaKristu mazhinji vanozviputira mune chepfu yekupofu kwemweya. Vanoda kusunungurwa kubva kudhimoni iri. Chinyorwa chinoti munamato unoshanda weakarurama unowana. Kana iwe uine mumwe munhu asingade kuteerera kuevhangeri yaKristu kana asingatendi murufu uye nekumuka kwaKristu Jesu, ita zvakanaka kuvanamatira. Kana mumwe wako asisaendi kuchechi zvakare kana kutenda muna Jesu Kristu, usaramba wakanyarara pamunamato uyu. Namata nemwoyo wese.
Ishe, ndinokutendai nenyasha dzekuona rimwe zuva. Ndinokukudzai nekundipa mukana wekunamatira nyaya iyi zvakare. Ndinokutendai netsitsi dzenyu; zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamatira ruregerero rwechivi changu, munzira ipi neipi yandakatadza uye ndikakundisa kubwinya kwako, ndinonamata kuti mundiregerere muzita raJesu. Nekuda kwekudeuka kweropa pamuchinjikwa weCalvari, ndinonamata kuti mushambidze zvivi zvangu chose muzita raJesu.
Ishe, chifukidziro chese chaSatani chakafukidza moyo wangu zvichiita kuti zvinetse kuti vhangeri raKristu ripinde. Ndinobvisa machira akadaro nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu.
Ishe, mhando dzese dzehupofu dziri kundinetsa, ndinoraira kupora pandiri muzita raJesu. Ndinoraira kuti kupodzwa kwaMwari kuchauya pandiri muzita raJesu.
Ishe, ndinodambura ngetani dzose dzedhimoni dzave kushandiswa kundibata. Ndinovaparadza nhasi muzita raJesu. Ndinonamatira nzeve dzinoteerera uye nemoyo wakapfava, mweya wekuputsika. Ndinonamata kuti mundipe muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti muongorore moyo wangu, uye muporese hupofu hwese pauri nhasi muzita raJesu. Ndinoramba kuramba ndichifamba murima. Ndiri kuda kutanga kuratidza muchiedza chinoshamisa chaMwari. Ishe, ndinonamata kuti hupofu hwese huri mumoyo mangu hunopora nhasi muzita raJesu.
Simba rese rakadzivira moyo wangu kupokana neevhangeri yaKristu, ndinokuparadza nhasi muzita raJesu. Ndinonamatira zvemhando yepamusoro yekusangana nababa. Ndinonamata kuti zviitike muzita raJesu.
Ndinonamatira kusangana. Kusangana kuchabvisa chifukidziro chese chemadhimoni chakashandiswa kuvhara maziso angu, ndinonamata kuti murege izvi zviitike muzita raJesu. Rudzi rwekusangana kwawakakonzera Mupostori Pauro kuva naro achienda kuDhamasiko, ndinonamata kuti iwe uchanditendera kuti ndive naro muzita raJesu.
Ishe, zvese zvakaipa museve iro rakadzingwa kuti riparadze maziso angu nenzeve zvemweya, ndinouya kuzorwa nemiseve yakadaro neropa regwayana. Ini ndinotsiura kwese kwese nyonganiso mumoyo mangu pamusoro peMwanakomana wemunhu. Ishe ndinonamata kuti muzondishanyira nhasi nemaoko enyu ane simba muzita raJesu.
Ndinonamatira rudzi rwakakosha rwechizaruro chinozojekesa kusahadzika kwangu nezve muchinjikwa uye nemurume anonzi Jesu Kristu. Ndinonamata kuti iwe ngazviitike kwandiri nemuzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti mundisunungure kubva kumarudzi ese ehupofu muzita raJesu. Kubva nhasi, ini ndinogonesa yangu yemweya pfungwa nhengo. Maziso angu akavhurwa muzita raJesu. Nzeve dzangu dzakavhurika muzita raJesu. Ndinoraira kuti moyo wangu utsveneswe nemuzita raJesu.
Ishe, chifukidziro chese chakaipa chishandiswa kuvhara maziso angu chinobatira moto nhasi muzita raJesu.
Previous nyayaHumbowo hweMagwaro hwekuti Mweya waMwari uri kukutungamira
inoteveraAnonamata Anonamata Anonongedza Kumutsidzira Vakafa Mugumo
Kunamata Kunongedzera Kupokana Nezvakaipa Zvirongwa
70 Dzununuro dzePamunamato Pfungwa